सावधान, ब्ल्याक फङ्गसबाट संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतको ज्यानै जान सक्छ ! -
Banner News 06/01/2021
सावधान, ब्ल्याक फङ्गसबाट संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतको ज्यानै जान सक्छ !
काठमाडाै, १८ जेठ । भारतसँगै नेपालमा पनि म्युकोरमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फङ्गस (कालो ढुसी)का बिरामी देखिन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १० भन्दा बढीमा ब्ल्याक फङ्गस अर्थात् कालो ढुसी देखिएको हो । भारतका कतिपय राज्यमा ब्ल्याक फङ्गसलाई महामारीको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितमा क्रमशः ब्ल्याक फङ्गस देखिन थालेको आईओएमका सहप्राध्यापक तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बम बताउँछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कालो ढुसी सक्रमण भएका ४० वर्षका एक पुरुषको शल्यक्रिया गरिएको डा.बमले बताए । कालो ढुसी देखिएका ति व्यक्तिको आँखा र नाकको शल्यक्रिया गरिएको हो । शल्यक्रिया गरिएका ती बिरामीलाई एम्फोटेरिसिन बी औषधिको प्रयोगबाट उपचार गरिरहेको डा.बमले जानकारी दिए । ‘फङ्गस अर्थात (कालो ढुसी) अर्का एक जनाको शल्यक्रियाको तयारी भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना मुक्त भएर अस्पतालबाट फर्किसकेपछि ललितपुरका एक जनामा कालो ढुसी देखिएको उपचारको लागि टिचिङ अस्पताल आउनुभएको छ ।’
यस्तै वीर अस्पतालपनि ३१ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणपछि कालो ढुसीको समस्या देखिएपछि सोमबार शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ती ३१ वर्षीय पुरुषको नाक तथा आँखामा फैलिसकेको फङ्गस शल्यक्रिया गरेर निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ । सर्जरी पछि कोभिड आईसीयूमा उपचार भइरहेको अस्पताल पूर्व निमित्त निर्देशक डा.शान्ता सापकोटाले बताइन् । नेपालमा पनि कोरोनामुक्त भइसकेपछि म्युकोरमाइकोसिसको समस्या देखिएको डा. बम बताउँछन् ।
कसरी सर्छ कालो ढुसी
फोक्सोमा पनि ब्ल्याक फङ्गसले श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट क्षति पु¥याउन सक्छ । शरीरमा कुनै घाउ वा जलेको भए त्यहाँबाट संक्रमण शरीरका विभिन्न भागमा सक्रमण फैलन सक्छ । कालो ढुसी शरीरको जुन क्षेत्रमा पनि लाग्न सक्छ । जहाँ कालो ढुसी लाग्छ त्यहाँको भाग काम नलाग्ने बनाउन सक्छ । जस्तै अहिलेसम्म नाम, मुख, आँखाको वरिपरिको भागमा कालो ढुसी लागेको देखिएको छ । भारतमा कालो ढुसी आँखा वरिपरि लाग्दा आँखा नै निकाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीले सुनाए । आँखाको ज्योति समेत गुम्नसक्छ । यो टाउकोमा भयो भने ब्रेन ट्युमर लगायतका रोग लाग्छ । समयमै उपचार भएन भने दिमागसम्म पुगेको कालो ढुसीले मृत्युको संख्या उच्च रहेको उनी बताउँछन् ।
यो शरीरमा संक्रमण हुँदा कस्तो लक्षण देखिन्छ
ब्ल्याक फङ्गसबाट यसरी बच्ने
कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिलाई ब्ल्याक फङ्गस संक्रमण भएको छ । कोरोना मुक्त भएपनि स्वास्थ चेकजाँच गराइरहन डा. बमको आग्रह छ । ब्ल्याक फङ्गसको लक्षण देखिएमा तत्काल अस्पताल पुग्ने तथा चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ । ब्ल्याक फङ्गस भएको सुरुवाती अवस्थामै थाहा पाएको खण्डमा उपचार सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
कोभिड, ननकोभिड दुवै खाल बिरामी तथा अन्य सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिमा पनि सावधानी नअपनाएको खण्डमा यो लाग्न सक्छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्र, अत्याधिक फोहोर तथा धुलो हुने क्षेत्रमा नजान उनको आग्रह छ । बगैँचामा जाँदा, खेती गर्दा लामो बाहुला भएका कपडा, पञ्जा लगाउने गर्नुपर्छ ।
कोभिडसँगै मधुमेह तथा अन्य दीर्घरोगीलाई घर तथा अस्पतालमा विशेष ख्याल गर्न अतिआवश्यक भएको उनको भनाइ छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कालो ढुसी संक्रमित बिरामी नेपालमा पनि देखिन थालेपछि निदानका लागि अस्पताल भर्ना भएका बिरामीबारे सचेत हुन निर्देशन दिइसकेको छ ।
@याे सामाचार माया श्रेठले राताेपाटीमा लेखेकि छिन।
पाेखरीमा डुबेर एक बालककाे मृत्यु
सरावल गाउँपालिकाले गरिब परिवारलाइ बितरण गर्यो राहत
Banner News 10/23/2018
नवलपरासीमा आफनै साथीबाट एक जनाको हत्या र एक जना घाइते
परासी, ६ कार्तिक । नवलपरासीमा एक समुहले आक्रमण गरि एक जनाको हत्या गरेको छ भने एक जनालाइ घाईते बनाएको छ । पुर्व रिसइबी कारण उक्त समुहले आफनै साथी माथि सांघातिक आक्रमण गरि पाल्हीनन्दन गाउँपालिका १ सुनरी बस्ने ३६ बर्षिय गणेश सहानीको हत्या गरेको छ भने पाल्हीनन्द गाउँपालिका ३ कुश्मा बस्ने ३६ बर्षिय नर्वदेश्वर चौहानलाइ गम्भीर […]
प्रमुख समाचार 08/15/2018
५ करोडको ठेक्का ९७ लाखमा सिमित : मिलोमतोमा केरुङ्ग खाेलाको ठेक्का, राजश्वमा धक्का
भबिश्वर पाण्डे । कावासोती, २० माघ । बिगतको बर्षहरुमा करोडाैमा जाने केरुङ्ग खोलाको ठेक्का यसवर्ष लाखैमा सिमित हुने देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा केरुङ्ग खेला ५ करोड २९ लाख ९५ हजार रुपैयामा ठेक्का लागेको थियो तर यसवर्ष कावासोती नगरपालिकाले कम क्वान्टीटी देखाएर जम्मा ९७ लाखको हाहाराहारीमा सो खेलाको ठेक्का दिने भएको छ । […]